Semalt: Ahoana no fomba fampiasana tsara indrindra ny Wikipedia Wikipedia rehefa tsy navela ianao
Raha toa ka na aiza na aiza dia misy fifandraisana amin'ny haingam-pandeha haingana dia mbola misy toerana izay tsy misy fifandraisana mihitsy na dia amin'ity taona ity aza. Ny toerana sasany dia manana fifandraisana tsy misy dikany, noho izany dia mila miara-miasa amin'ny fandefasana ny bandwidth amin'ny toerana hafa ianao. Ohatra tena tsara tokoa ianao rehefa mandeha eny amin'ny rivotra na rehefa any ivelany ianao.
Amin'ny toe-javatra roa, dia azonao atao ny manangona pejy maro mba hahafahanao hamaky azy ireo aorian'izay rehefa tsy misy ny telefaona. Ivan Konovalov, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa misy apps Wikipedia ho an'ny Android sy iOS izay mamela ny mpampiasa hamonjy lahatsoratra izay azo atokisana rehefa misy offline.
Ho hamonjy pejy amin'ny Android
Tsindrio ireo teboka telo eo amin'ny zoro ambony farany amin'ny efijery. Ity dia atao amin'ny bokotra menu
Misafidiana "Save page" amin'ny lisitry ny safidy izay hiseho.
Ahoana ny fomba hitadiavana lahatsoratra voavonjy ao amin'ny Android
Mandehana any amin'ny loha-hevitra lehibe ary fidio ny pejy "Voavonjy."
Ahoana no hamonjena pejy amin'ny iOS
Tsy maintsy ilainao fotsiny ny pikantsary ao amin'ny faran'ny lahatsoratra ary voavonjy izy io. Vao mainka mora kokoa izany.
Ahoana ny fomba hitadiavana lahatsoratra voavonjy ao amin'ny iOS
Ny dikan-teny roa amin'ny app dia mamela anao mamerina mamoaka ilay lahatsoratra miaraka amin'ny votoaty farany raha vao tafaverina indray ny connexion. Na izany aza, ny version Android dia manana tombony hafa amin'ny dikan-teny iOS amin'ny app. Ireo mpampiasa mba hitady pejy miafina.
Na dia manana fifandraisana aza ianao, dia misy antony roa mety mbola tianao ny mamaky lahatsoratra voavonjy ao amin'ny fomba ivelan'ny aterineto. Tsy misy karazana fanelingelenana izany. Raha mila fifantohana be indrindra ianao, ny fampahafantarana toy ny SMS tonga, ny antso, ny hafatra Twitter ary ny hafa dia afaka manelingelina anao amin'ny ratsy, mampihena ny fifantohana, ary manamaivana ny paosinao. Ny antony iray hafa dia ny famelombelomana ny pejy dia handika azy io miaraka amin'ny votoatiny ankehitriny. Midika izany fa mety tsy hamoaka fampahalalana manan-danja ao amin'ny pejy voavonjy ianao.
Tsy maintsy nesorina Wikipedia ny alàlan'ny fomba fiaramanidina. Noho izany, arakaraky ny halavan'ny dia halehanao ny dia ary haingana dia haingana ianao dia afaka manangona pejy ampy izay hahatonga anao ho be atao amin'ny alàlan'ny dianao raha toa ianao mpamaky sarotra.
Miaro ny batterie amin'ny fitaovana ampiasainao koa ny atidoha. Midika izany fa afaka mamaky lahatsoratra marobe ianao alohan'ny famoahana ny batterie amin'ny alàlan'ny aterineto tsy an-tserasera. Na ny mpianatra aza dia afaka manararaotra ny pejy Wikipedia an-tserasera.
Amin'ny maha-mpianatra anao dia afaka manao fikarohana amin'ny Wikipedia ianao ary mamonjy ireo pejy manan-danja. Na manana fifandraisana ianao na tsia, tsara kokoa ny manova ny fitaovana ampiasainao amin'ny alàlan'ny offline, satria 100% ny fifantohana dia ilaina mba hamaky sy hamaky ireo pejy voavonjy. Azonao atao ihany koa ny mametraka ireo hevi-dehibe amin'ny lohataona mamaky ireo pejy. Mampalahelo fa maro ny olona no tsy mahafantatra an'io endri-pihariana Wikipedia io intsony Source .